Iitharnati zecarnival ezinobisi oluvumelekileyo | Ukupheka kweKhitshi
Iitharnati zecarnival ezinobisi oluqhelekileyo
UMaria vazquez | 14/02/2021 10:00 | Iiresiphi zeCarnival
Ukugcotywa kwecarnival, Ngale ndlela besisoloko sibiza iitorrias ekhaya. Qho ngonyaka xa kufika iveki yeCarnival, siyazilungiselela, nokuba kungasonka esidala okanye nesonka esilungiselelwa ukubhaka. Kwaye le yokugqibela sesiyisebenzisile ukulungiselela ezi zinto zenziwe nge-Carnival ngobisi oluvumayo endikuphakamisayo namhlanje.
Ipani yetorrijas yi Isonka seBrioche. Isonka esithambile kakhulu esifunxa ulwelo kunye namavumba arhabaxa afafazwa iiglasi ngaphambi kokuba uqhotswe. Kwimeko yethu, ubisi lufakwe ilamuni kunye nesinamon kwaye ludityaniswe nobisi olujiyileyo, ukulunika ukubamba okumnandi ngakumbi.
Awunaso isonka sokwenza iowusti? Ungayilungiselela ngesonka esidala; Abayi kungcamla ngokufanayo kodwa baya kuba dessert egqibeleleyo ukubhiyozela Carnival. Ngexesha lokuqhubeka kuya kufuneka uyenze ngendlela efanayo, ulawule ukuba ukuntywila kwanele ukuba ukwazi ukusebenza nezilayi kamva ngaphandle kokophula. Kwaye ukuba awufuni ukusebenzisa isonka, ungabuyela kwenye idessert yomkhosi: ubisi olosiweyo. Ngaba siza kuhla siye kushishino?
Ezi toast zeCarnival zinobisi olunamanzi enza i-snack efanelekileyo yedessert. Ithenda, ifumile kwaye imnandi, imnandi kakhulu.
Uhlobo lweRipeipe: Idessert
Ixesha lokupheka: 20 m
Ixesha elipheleleyo: 35 m
400 ml. ubisi
Umdla we-½ lemon
1 iintonga zesinamon
150 g. ubisi olunencindi
1-2 Amaqanda okuthambisa
Iswekile kunye nesinamoni xa kususwa uthuli
Beka ubisi kunye ne-lemon kunye ne-sinamoni epanini kunye yizise kwimathumba. Xa ibila, susa emlilweni kwaye ubisi malufake kude kube shushu, malunga nesiqingatha seyure.
Sisebenzisa eli xesha ukuze usike izilayi zezonka Iisentimitha ezi-2-3 ubukhulu zityebile, ukuze ii-torrijas zibe naloo milo yesiko.
Emva sibeka izilayi kumthombo nzulu ngokwaneleyo ukubamba ubisi kunye nobungakanani ukuze izilayi zingafumbi.
Xa ubisi lufudumele, phantse lubanda, sidibanisa nobisi olujijiweyo de kube kufumaneke umxube ofanayo.
Ke Umxube siwuthululela kumthombo nezilayi zesonka. Sibavumela ukuba batshise okwemizuzu embalwa kwaye sibaguqulele ukuze benze okufanayo kwelinye icala ngomnye umzuzu. Emva koko sibeka into kwitreyi eyenza ukuba ulwelo luye kwelinye icala ukuze ingachukumisi i-toast.
Silungisa isitya ngomxube weswekile kunye nesinamoni kunye nenye eneqanda elibethiweyo. Sidlulise i-toast ngeqanda kunye ne Sifry kwiibhetshi kwioyile kushushu de kube mdaka ngombala kumacala omabini.
Xa sele siyigolide, siyazikhupha, sikhuphe kancinci kwiphepha lokufunxa kwelinye icala kwaye kwangoko emva koko Sibabetha ngeswekile kunye nesinamoni, ukungcamla
Siyeke ukuba zipholile I-toval ye-Canaval ngaphambi kokuzama, ukuba sinako!
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izihlandlo ezikhethekileyo » Iiresiphi zeCarnival » Iitharnati zecarnival ezinobisi oluqhelekileyo
Iichickpeas ezinechorizo ​​kunye neetapile
Inkukhu kunye ne-romanesco ivusa i-fry ngamandongomane